people of zimbabwe - Thaindian News
US, South Africa pledge to boost ties
August 8th, 2009 - 5:41 am ICT by IANS
Pretoria, Aug 8 (IANS) Visiting US Secretary of State Hillary Clinton and her South African counterpart Maite Nkoana-Mashabane have vowed to boost cooperation between the two countries, BuaNews reported. Clinton arrived here ... Read more...
Pretoria, Feb 12 (IANS) South African President Kgalema Motlanthe Thursday called on the international community to come forward and help Zimbabweans rebuild their nation under the newly formed unity government, BuaNews reported. Motlanthe, ... Read more...
Mugabe prepares for lavish 85th birthday bash as Zimbabwe starves
February 11th, 2009 - 5:52 pm ICT by ANI
Harare, Feb.11 (ANI): President Robert Mugabe is planning a lavish 85th birthday feast, even as millions of Zimbabweans starve. According to The Sun, Mugabe has demanded 2,000 bottles of Moet and ... Read more...
Mugabe accuses UK of spreading cholera among Zimbabweans
December 13th, 2008 - 6:12 pm ICT by ANI
Harare, Dec.13 (ANI): Zimbabwe President Robert Mugabe has accused Britain of waging "biological warfare" against his people through a cholera outbreak that has killed at least 800 people so far. Health ... Read more...
US to impose sanctions against Mugabe regime: Bush
July 15th, 2008 - 11:18 pm ICT by IANS
Xinhua Washington, July 15 (Xinhua) US President George W. Bush Tuesday said his administration was considering sanctions against the people associated with the regime of Zimbabwean President Robert Mugabe. "These sanctions were not ... Read more...
Zimbabwe poll failed to represent people’s will: SADC
June 30th, 2008 - 3:03 am ICT by IANS
DPA Harare/Johannesburg, June 30 (DPA) A southern African election observer team said Zimbabwe's one-man presidential election run-off that returned President Robert Mugabe as uncontested leader for a further five years Sunday "did not ... Read more...
US says Zimbabwe in humanitarian crisis, calls for justice
April 30th, 2008 - 3:40 pm ICT by admin
DPA Harare, April 30 (DPA) The US has said delay in releasing results of Zimbabwe's March elections has created a humanitarian crisis because of violence. Washington's envoy to Zimbabwe, James McGee, told reporters ... Read more...